Duufaanta waxay ka tagtay khasaarooyin fara badan iyo laba dhimasho Murcia iyo Alicante | Saadaasha Shabakadda
Jarmal Portillo | | Daadadka
Fatahaada Webiga Orihuela. Sawir: Manuel Lorenzo (EFE)
Roobabka iyo dabaysha saameyneysa dhammaan koonfur-bari ee Jasiiradda Iberia iyo jasiiradaha Balearic ayaa waxay geystaan ​​khasaaro badan. Dhibaatooyinkaas waxaa ka mid ah fatahaadda webiga, burburka agabyada iyo daadadka guryaha, xiridda iskuulada iyo waddooyinka waxaana ugu darnaa dhammaan laba dhimasho.
Duufaantan ayaa bilaabi doonta inay degto oo ay ka baxdo berrito jasiiradda laakiin waxay ku sii jirtaa jasiiradaha Balearic iyo qaybo ka mid ah Catalonia.
Guryaha daadku qaaday. Sawir: Monica Torres
Dhimashadu waxay ku dhacday Murcia iyo Alicante. Xaaladda Muria, meydka nin 40 jir ah ayaa kan hadda la geeyay guri ku yaal Los Alcázares. Waxay dhacday Sabtidii la soo dhaafay markii nin waayeel ah ay xoogagga biyuhu ku riixeen finestrat cove.
Marka laga hadlayo daadadka, waxaan ka helnay wabiga Segura sida uu u marayo Orihuela ee Alicante iyo Júcar Hydrographic Confederation ayaa go'aansaday inay ka soo baxaan daadadka Bellús iyo Beniarrés si loo yareeyo qulqulka qulqulka.
1 Burbur ka dhashay Murcia
2 Burbur ka dhacay Valencia iyo Jasiiradaha Balearic
3 Khatartu wali ma dhamaan
Burbur ka dhashay Murcia
Si loo qiimeeyo qasaaraha ay geysteen duufaanta, madaxweynaha Murcia, Pedro Antonio Sánchez, ayaa faray kulan isuduwid dhamaan shaqaalaha gurmadka si loo awoodo in la tiro koobo. Shirka waxaa sidoo kale ka soo qaybgalay ergada dawladda, Antonio Sánchez-Solís.
Kulanka ka sokoow wasiirka arimaha gudaha, Juan Ignacio Zoido, wuxuu u safray Murcia si uu u booqdo dhamaan meelaha ugu badan ee ay dhibaatadu saameysey wuxuuna abaabulay ciidamada u xilsaaran xaaladaha deg degga ah, amniga iyo howlaha gargaarka.
Wasaaradda gaashaandhigga ayaa dejisay guuto cusub oo ka mid ah Qeybta Gurmadka Milatariga (UME) taasi waxay caawin doontaa 160-kii ciidan ee la geeyay waaberigii magaalada Los Alcázares. Guutada cusub waxay ka kooban yihiin ilaa konton askari.
Buux dhaafiyay Rio Clariano. Sawir: Juan Carlos Cárdenas (EFE)
Roobabku aad ayey u xoog badnaayeen oo in maalin kaliya ayaa roob da'ay 57% dhamaan roobabkii da'ay sanad gudihii. Tani waxay sababtay daadad 19 waddo oo ka tirsan degmooyinka Murcia ee Cartagena, Torre Pacheco, San Javier, San Pedro del Pinatar, Águilas iyo Mazarrón. Waxay sidoo kale qasabtay in la xiro isbitaalada ku dhowaad gobolka oo dhan, iyo sidoo kale kulliyado iyo machadyo ku yaal 28 degmo iyo saddexda jaamacadood. Si loo daweeyo dadka ay saameeyeen daadadka, Xarunta Waxqabadka Sare ee Infanta Elena, Laanqayrta Cas waxay hoy u sameysay ilaa 200 oo qof oo laga soo saaray guryahooda oo ku yaal Los Alcázares.
Laanqayrta Cas tabaruc Sawir: Manuel Lorenzo (EFE)
Burbur ka dhacay Valencia iyo Jasiiradaha Balearic
Gobollada Alicante iyo Valencia weli waxay ku sugan yihiin khatar gaar ah waana taas sababta 14 waddo ay weli daadadka u gooyeen. dheeraad ah ilaa 129 degmooyin ah ayaa joojiyay fasalada iyo sidoo kale afarta xarumood ee Jaamacadda Miguel Hernández ee Elche.
Magaalada Valencia wabiga Clariano ayaa buux dhaafiyay wuxuuna sababay fatahaada dhowr guri oo kuyaala magaalada Ontinyent waana qasab in laga saaro. Wabiga Magro, oo ah qayb ka mid ah Júcar, ayaa diiwaangaliyay daad aad u muhiim ah marka uu sii maro Real, Montroy iyo Alcudia.
Daadadka garaashyada. Sawir: Morell (EFE)
Dhinaca kale, jasiiradaha Balearic, Adeegga Degdegga ah waxay kaqeybgashay 148 dhacdo 12 saacadood gudahood. Dhacdooyinka midkoodna ma aheyn mid aad u culus, laakiin waxay ku filneyd in maanta iyo berri laga gooyo fasallada 17-ka degmo sababo la xiriira dhibaatooyinka wadista gawaarida ee waddooyinka.
Khatartu wali ma dhamaan
Khatarta fatahaad iyo roobab culus ayaa wali ku sii jira Alicante iyo Valencia. Sida laga soo xigtay Wakaaladda Saadaasha Hawada ee Gobolka, digniinta casaanka waxaa loo ilaaliyaa roobka iyo digniinta liinta ee xeebta ka jirta dabeylo iyo hirar xoog leh oo ka badan afar mitir awgood.
Madaxweynaha Generalitat Valenciana, Ximo Puig, ayaa ku dhawaaqay in Dowladdiisu ay ansixin doonto tallaabooyinka Jimcaha si loo yareeyo qasaaraha ka dhashay duufaantan iyo tii dhacday 27 iyo 28-kii Nofeembar.
Nasiib wanaag, laga bilaabo berrito duufaantan waxay hoos uga dhaceysaa koonfur-bari jasiiradda, in kastoo roobab culus ay ka sii socdaan Jasiiradaha Balearic (gaar ahaan Mallorca iyo Menorca) iyo sidoo kale waqooyi-bari Catalonia
Wadada buuxda ee maqaalka: Saadaasha Shabakadda » Dhacdooyinka saadaasha hawada » Daadadka » Duufaanta waxay ka tagaysaa khasaarooyin fara badan iyo laba dhimasho Murcia iyo Alicante
Waa maxay farqiga u dhexeeya cimilada iyo cimilada?